विश्वफुटबलमा मेस्सी र रोनाल्डोको १० बर्षे दबदबा, अब को ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५१४:३१0
काठमाडौं, ३१ जेठ । पछिल्लो १० बर्षमा लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोानाल्डोले फिफा बेस्ट प्लेयरको उपाधि पाँच–पाँच पटक जितेका छन् । अर्जेन्टिना तथा बार्सिलोनका मेस्सी र पोर्चुगल तथा रियल मड्रिडका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले यो उपाधि दश बर्ष यता बाँडेर लिदैं आएका छन् । उनीहरुको यो होड अहिले नै रोकिने छाँट देखिँदैन ।
आजबाट रसियामा विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण सुरु हुँदैछ । व्यवसायिक फुटबलको सिजिन समाप्त भएको छ, र केही समय पछि नयाँ सिजन सुरु हुनेछ । यही अवस्थामा फिफाको आधिकारी वेवसाइटमा मेस्सी र रोनाल्डो पछि विश्व फुटबलको स्टार को ? भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
क्राउन फ्रिन्सः नेयमार (ब्राजिल)
यी स्टाइलिश फवार्ड वर्तमान फुटबलका सबैभन्दा महँगा खेलाडी हुन् । गत सिजन बार्सिलोनबाट विश्व किर्तिमानी रकममा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) गएपछि उनी सबैभन्दा महँगा फुटबलर बनेका हुन् । उनले मेस्सी र रोनाल्डोको झैं उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न सक्छन् । उत्कृष्ट ड्रिबिलिङ क्षमता, बौद्धिक खेल शैली, चुस्त फिनिसिङ, मजा लिएर खेल्ने तरिका उनको विषेशता हो । विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी हुन् आवश्यक सबै गुण उनीसँग छ । २०१४ को विश्वकपमा जर्मनीसँग हार व्यहोर्दा उनी घाइते अवस्थामा थिए । त्यो लज्जाजनक हारको २ बर्ष पछि उनले ओलम्पिक गोल्ड मेडल जितेका थिए । अहिले उनी विश्वकपको उपाधि जित्ने अभियानमा छन् । मेस्सी र रोनाल्डो पछिको उत्कृष्ट खेलाडी को ? भन्ने प्रश्नको सबैभन्दा ठूलो जवाफ, नेयमार नै हो ।
सुटिङ स्टारः मोहम्मद सलहा (इजिप्ट)
२०१७ मा लिभरपुल जानु अघि सलहा उत्कृष्ट र असाधारण विंगर नभएको बताइन्थ्यो । यद्यपी उनको तिव्र गतिमा खेल्ने शैलीको भने सबैले प्रशंसा गर्ने गरेका थिए । जब जोर्गेन क्लोपले उनलाई लिभरपुलमा अनुबन्ध गरे र क्लोपले आफ्नो शैलीमा खेलाउन थाले तब सलाहले गज्जव गर्न थाले । आफ्नो वास्तविक क्षमता उनले लिभरपुल आएर देखाए । उनले गत सिजनमा प्रिमियर लिगमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्दै गोल्डेन बुट जिते । सलाहले आफ्नै जोडबलमा २८ बर्षपछि इजिप्टलाई विश्वकपमा छनौट गराए । च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलमा घाइते भएका सलाह अहिले विश्वकप प्रशिक्षमा सहभागि भएका छन् । उनले पनि फिफा वेस्ट प्लेयरमा आफ्नो बलियो दावी पेश गर्न सक्छन् ।
असिस्ट किङः केविन डी ब्रुने (बेल्जियम)
म्यानचेस्टर सिटीका ब्रुने गोलका लागि पास उपलब्ध गराउने सूचीको शिर्ष स्थानमा छन् । आक्रमण र गोल गर्न आवश्यक मुभ बनाउन उनी माहिर मानिन्छन् । उनी आफैं पनि राम्रो फिनिसिङ गर्न सक्ने क्षमता भएका खेलाडी हुन् । उनले यो सिजन सिटीबाट प्रिमियर लिग जितेका छन् । यस्तै विश्वकपमा पनि उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने अभियानमा उनी छन् । यो बर्षको फिफा बेस्ट प्लेयरको सूचीको शिर्ष स्थानमा उनको नाम पनि पर्न सक्छ ।
मास्टर अफ अन्डर स्टेटमेन्टः ह्यारी केन (इंग्ल्याण्ड)
इंग्लयाण्डले ह्यारी केन जस्तो विश्वस्तरिय स्ट्राइकर पहिलो पटक पाएको छ । इंग्ल्याण्डका एलन शियरर १९९६ मा फिफा वेस्ट प्लेयर अवार्डमा तेस्रो भएका थिए । २४ बर्षिय केनको खेल्ने शैली उत्कृष्ट छ । जुनसुकै बेला पनि उनी विपक्षीका लागि खतरा बन्ने गरेका छन् । गत सिजनमा टोटनह्यामबाट उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका केनलाई प्रशिक्षक ग्यारेथ साउथगेटले विश्वकपमा इंग्ल्याण्डको कप्तानको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । उनले विश्वकपमा प्रभावशाली प्रर्दशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनको खेल्ने शैली नेयमारकै स्तरको छ ।
योङ प्राग्डीः केलियन एमबाप्पे (फ्रान्स)
१९ बर्षिय बाप्पे विश्वका दोस्रा महँगा खेलाडी हुन् । फिफा वेस्ट प्लेयरको सर्ट लिस्टमा हुने उनी सबैभन्दा कान्छा खेलाडी हुन् । उनी राम्रा फिनिसर हुन् । गत सिजनमा उनले लिग वान को उपाधि जितेका छन् । उनले पिएसजीबाट सबै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका छन् । पिएसजीमा नेयमारसँग उनको तालमेल निकै सुन्दर छ । उनी विश्वफुटबलका तारा हुन् ।
स्विमिङड्रेस लगाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दा जागिर नै गुम्यो